theZOMI: Burma News International - April 1, 2013
Burma News International - April 1, 2013
Authorities meet public to clarify its plan of selling Rock Mountain to foreign company
Taungup: Two ministers in Arakan state government met the public in Taungup,atown located in the southern part of Arakan state, on Wednesday to explain its plan to sellavaluable rock mountain, Naypu Taung, toaVietnamese company.
Myanmar’s Ministry of Commerce has announced that plans are afoot to openatrading market in Pan Saung,atown in northern Sagaing Division that straddles the Indo-Myanmar border.
Garbage from Shwe gas project widely damages environment in Arakan
Garbage from Shwe Gas project is damaging the environment of the surrounding area of the project in Arakan, said local residents and environmental activists in the area.
Tachileik based army officer summoned to Kengtung in connection with killing of battalion officer
Related to the fatal shooting incident between Light Infantry Battalion (LIB) 331 commander and his deputy Tachilek, the commander of the city’s operations command has been called to Kengtung by the Triangle Region Command for further interrogation, said news sources close to Tatmadaw.
သွေးစည်း ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင် များသည် ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီ သစ်များ ရရှိရေး အတွက် ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ် သစ်နှင့် တွေ့ဆုံ နိုင်ရန် ယမာန်နေ့ည (၁၀) နာရီ ခန့်တွင် ဂျပန် နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသည်ဟု ခရီးစဉ် ထဲ၌ ပါသော အဖွဲ့ဝင် တဦးက ဆိုပါသည်။
မီးဘေးသင့်ကရင်နီဒုက္ခသည်များ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြားရောဂါများ စတင်ဖြစ်ပွား
ကရင်နီဒုက္ခသည် အမှတ် ၂ စခန်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် အသက်ရှူလမ်း ကြောင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါနှင့် ၀မ်းရောဂါများ ဖြစ်ပွားလာပြီလို့ ကရင်နီကျန်းမာရေးဌာန ကပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အကျဉ်းကျနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အကျဉ်းသားများ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ တွင် ကျရောက်မည့် ထိုင်းဘုရင် မင်းမြတ် ဖူမိဖွန် အဒု လဒိစ် (King Bhumibol Adulyadej) ၏ သက်တော် ၈၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့၌ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် ပြစ်ဒဏ် လျှော့ပေါ့ခွင့်များ ရရှိရန် မျှော်လင့်ရကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီးက ပြောသည်။
“စနောင်းတိုင်း” မွန်ဘာသာသတင်းစာ မကြာမှီဖြန့်ချိတော့မည်
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့အခြေစိုက် “စနောင်းတိုင်း” (Guiding Star) မြန်မာဘာသာအား ဖြင့် “ဓူဝံကြယ်” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသော လစဉ်ထုတ် မွန်သတင်းစာကို ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ထုတ်ဝေတော့မည်ဖြစ်သည်။
မြစ်ကြီးနား တပ်ကုန်းဒုက္ခသည်များ နေ့စဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအခက်တွေ့
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ တပ်ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ စစ်ရှောင်စခန်းမှ ဒုက္ခသည်များ နေ့စဉ်အသက်ရှင် နေထိုင်ရေးအတွက် အခက်ခဲများရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဒုက္ခသည်စခန်း တာဝန်ခံ မှသိရသည်။
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး နှုတ်ထွက်ပေးရန် သံတွဲအမျိုးသမီးများဆန္ဒပြ
အစိုးရစစ်ကြောင်း မိုင်းနင်းမိ ၂ ယောက်သေ ကျေးလက်လူထု ခြိမ်းခြောက်ရိုက်နှက်ခံရ